Nigeria: Boqol ka badan baa dhimatay - BBC Somali
Nigeria: Boqol ka badan baa dhimatay
Image caption Kooxaxa gurmadka iyo dadka degaanka oo ku soo uruuray goobtii uu qaraxa ka dhacay Magaalada Jos
Madaxweynaha Nigeria, Goodluck Jonathan, ayaa cambaareeyay qaraxyadii ka dhacay magaalada Jos, qaraxyadaas oo ay ku dhinteen ugu yaraan 118 qof.
Waxaa laga cabsi qabaa in maydad badan ay ilaa iyo haatan ku hoos jiraan dhismayaasha ay burburiyeen labada qarax.
Mr Jonathan ayaa sheegay in ay ka go'an tahay la dagaalanka argagixisada.
Hasayeeshee waxaa lagu dhaleeceeyay in uu ku guuldareystay in uu xaqiijiyo in ay dadka amaan ka helaan ololaha dabadheeraaday ee ay wado kooxda hubeysan ee Boko Haram.
Image caption sawiradii ugu horeeyey ee laga helay qaraxa Jos
Ka hor inta aanu qaraxyadu dhicin, goobtu waxa ay ahayd mid aad mashquul u ah oo ay ka buuxaan dad wax iibinayey iyo macaasmiishii wax ka iibsanaysay.
Ujeedadu sida muuqata waxa ay ahayd intii suuragal ah in la dilo dad aad u badan.
20 daqiiqo kaddib markii qaraxii hore uu dhacay, waxa qarxay kii labaad iyadoo weliba dhaawicii ka dhashay kii hore loola cararayo isbitaalada.
Hilibkii iyo xubnihii dadkii dhintay ayaa meel walba daadsan.
Baqdin iyo argagax weyn ayaa ka dhashay goobta, iyadoo gargaar degdega ah loo fidinayey dhibanayaasha.
Inkastoo aanan la ogayn cidda geysatay weerarkan, haddana kooxda Boko Haram ayaa horay u bartilmaamaydsatay Magaalada Jos, halkaas oo ay ku weerartay kaniisado.
Afhayeenka madaxweynaha Nigeria, Doyin Okupe, oo ka hadlay weerraradan ayaa sheegay in ay muddo qaadan doonto in la ogaado cidda ka dambeysay weerraradan.
Xiisad ayaa laga soo sheegayaa magaalada Jos, waxaana laga cabsiqabaa in ay dhacaan isku dhacyo dhexmara Muslimiinta iyo masiixiyiinta.
Weriye madax banaan oo BBC-da la hadlay ayaa waxa uu sheegay in dhalinyaro caraysan ay wadooyinka ku jareen jid gooyooyin.
Image caption Qarax ka dhacay Nigeria
Muddo ka badan 10 saano gobolka bartamaha ee dalka Nigeria waxaa ka dhacayey rabshado inta badan lagu tilmaamay in ay salka ku hayaan diin, balse dhab ahaantii ku qotoma lahaanshaha ama milkinta dhulka, qeybsashada kheyraadka iyo awooda dhinaca siyaasadda.
Gobolka Plateau, oo ay ka tirsan tahay magaalada Jos, waxa uu ku yaal bartamaha Nigeria, waana goobta kala qeybisa waqooyiga oo ay u badan yihiin Muslimiinta iyo koonfurta oo ay ku badan yihiin masiixiyiinta.
Talaadadii barlamaanka Nigeria ayaa waxa uu ansixiyey in muddo lix bilood ah oo kale lagu daro xaaladda degdega ah ee uu madaxweynuhu ku soo rogay gobollada waqooyi ee Adamawa, Borno, iyo Yobe.
In ka badan kun qof ayey kooxda Boko Haram ku dhishay weerraro ay ka fulisay dalka Nigeria tan iyo bilawgii sannadkan.
Waxa ay sidoo kale khafaalatay in ka badan 270 gabdhood oo ilaa haatan aanan la ogayn halka lagu hayo.
Wadammada ku yaala Galbeedka Afrika ayaa heshiis kula galay Nigeria in ay ka caawin doonaan dagaalka ay kula jirto kooxdan Boko Haram.
Tobanaan ku dhintay laba qarax oo ka dhacay Jos